ဤတွင်သရုပ်ဆောင် "Spider-Man" တွမ်ဟော်လန်ဆိုနီမှအသစ်-ဒစ္စနေးသဘောတူညီချက်ကယ်တင်ကူညီပေးခဲ့သည်ကိုဘယ်လိုဖြစ်ပါသည် - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » Entertainment BGR - Spider-Man "တွမ်ဟော်လန်ဆိုနီမှအသစ်-ဒစ္စနေးသဘောတူညီချက်ကယ်တင်ကူညီပေးခဲ့သည်" ဤတွင်သရုပ်ဆောင်ပုံကိုဖွင့် "
ဤတွင်သရုပ်ဆောင် "Spider-Man" တွမ်ဟော်လန်ဆိုနီမှအသစ်-ဒစ္စနေးသဘောတူညီချက်ကယ်တင်ကူညီပေးခဲ့သည်ကိုဘယ်လိုဖြစ်ပါသည် - BGR
Tele RELAY တစ်ခု4အောက်တိုဘာလ 2019
Spider-Man မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းသူ့အကွောငျးဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ မရသောကြောင့်, ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ. ဒီနွေရာသီ box office မှာဘီလီယံကျော်ဒေါ်လာထိဝင်ငွေရရှိခဲ့ပြီး, ဒါပေမယ့် Sony နဲ့ဒစ္စနေးတစ်ချိုးခဲ့ပြီ။ ပရိသတ်များကြောင့်သင်ယူခဲ့ကြ Spider-Man3အဆိုပါ MCU ၏မရှိတော့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Sony ကဒစ္စနေးနှင့်အတူအမြတ်အစွန်းဝေမျှဖို့မလိုဘဲ, ရုပ်ရှင် Spider-အခနျးငယျတစျယောကျတညျးလုပ်ရန်ကြိုးစားချင်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ - နှင့်အံ့ဩခြင်းစတူဒီယိုနဲ့ Kevin Feige အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးကြီးမားရုပ်ရှင်ဝဠာကိုခံစားခြင်းမရှိဘဲ
Sony နဲ့ဒစ္စနေးနောက်ဆုံးတော့သူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုဖြေရှင်းခြင်းနှင့်မေလနှောင်းပိုင်းတွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်အသစ်တစ်ခုသဘောတူညီချက်, လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါပြီ။ ့တူ, Spider-Man ဟာ MCU ပြန်ခဲ့ အနည်းဆုံးနှစ်ခုသည်အခြားခေါင်းစဉ် MCU ပေါ်လာဖို့ကတိနှင့်အတူ, ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဧရာမ crossover နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ: Avengers အဖြစ် . အပြင် Spider-Man3။ ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းမှာသိခဲ့ရတယ် အံ့ဩခြင်းပတေရုသက Parker MCU ရေးလိုက်စေခြင်းငှါ အဲဒီနှစျခုလာမည့်ဇာတ်ကားနှင့်အတူတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအစီရင်ခံစာ Sony နဲ့အံ့ဩခြင်းမယ့်လမ်းပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါပြောပါတယ်ပေမယ့် ယင်းစူပါဟီးရိုးဝေမျှ
အစောပိုင်းကယခုသီတင်းပတ်အသစ်တစ်ခုအစီရင်ခံစာ, ယခုတိုင်အောင်ငါး MCU ရုပ်ရှင်များတွင်က Parker / Spider-Man ကစားသူကိုတွမ်ဟော်လန်, စစ်မှန်သောဘဝတစ်စူပါဟီးရိုးပြောပါတယ် Sony နဲ့ဒစ္စနေးတိုက်တွန်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးစားပွဲဝိုင်းကိုပြန်သွားပါ။ ထိုအဒစ္စနေးအတွက်အာဏာအရှိဆုံးလူသည်ယခုအားလုံးအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
မှ ဟောလိဝုဒ်သတင်းထောက် သူတို့အတူတူအလုပျလုပျဖို့နည်းလမ်းရှာနိုင်အောင်ဟော်လန်ထပ်တလဲလဲ, နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် CEO ဖြစ်သူဒစ္စနေး၏, Bog Iger နှင့် Sony ၏ဥက္ကဋ္ဌတွမ် Rothman ဖို့မေတ္တာရပ်ခံထားပြီး
ဟော်လန်လာမည့်ရုပ်ရှင်အပေါ်အများအပြားမှတ်ချက်များကိုဖန်ဆင်း ပင့်ကူလူသား ဆိုနီမှအသစ်-ဒစ္စနေးအုပ်စုခွဲများ၏ demerger များ၏ကြေငြာချက်အပြီး။ ဒါဟာ Sony နဲ့အံ့ဩခြင်းအကြားအကြိုက်ဆုံးရွေးချယ်ရာတွင်မပါဘဲ Spider-Man နှင့်အတူကပ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်း, အခြိနျမှာမိမိမှတ်ချက်တွေအတွက်ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းခဲ့သည်။ တစ်ဦးသည်ယခုအခါအထင်ကရကိုးကား - ထိုသရုပ်ဆောင်သူက "23 3" ကိုခစျြသညျမိမိပရိတ်သတ်တွေပြောနေရုံနေ့ရက်များသတင်းများ၏ကြေငြာချက်အပြီးကုန်စည်ပြပွဲ D000 မှာအံ့သြစရာအသွင်အပြင်လုပ် နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ တိုနီက Parker, တိုနီ Stark ၏ဆရာ။ ထို့နောက်သူကအမှုအရာကို fix မှ Iger နှင့် Rothman မေးမြန်းခြင်း, အလုပ်သို့သွားကြ၏။
အစီရင်ခံစာ THR ဒစ္စနေးအနာဂတျအတှကျ Sony ကအတူထုတ်လုပ်မှုနှင့်အမြတ်အစွန်းခွဲစေချင်ကြောင်းညွှန်ပြ ပင့်ကူလူသား ။ ] ရုပ်ရှင်။ ထို့နောက်ဇန်နဝါရီလ, ဒစ္စနေးဟာရုပ်ရှင်ကား 25% ရန်ပုံငွေနှင့်အမြတ်အစွန်းများ 25% ရဖို့ပူဇော်ကြ၏။ အလန်ချိုဒစ္စနေးပထမဦးဆုံးမီ "ရုတ်တရက်ညှိနှိုင်းမှုကြားဖြတ်" ဖြစ်ပါတယ်နေချိန်မှာ Sony က, ခြောက်လကမ်းလှမ်းချက်ကိုကန့်ကွက်ပါဘူး ဝေးမူလစာမျက်နှာ မှစ. ။ ယခင်သဘောတူညီချက်မှာတော့ဒစ္စနေးယခင်ဇာတ်ကားများ၏စုစုပေါင်းအမြတ်အစွန်းများထက်နည်း 5% ရတယ် Spider-Man .
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်မှတ်ချက်ပေးရန် Iger ကြားနာမတိုင်မီသိရန်လိုအပ်သမျှရဲ့။ ဒစ္စနေး၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့် CEO ဖြစ်သူကသူ့စာအုပ်မြှင့်တင်ရန်ဂျင်မီ Kimmel ပျေါမှာထငျရှားပြီ, တစ်ဦးတစ်သက်တာ၏စီးနင် အဲဒီမှာသူကအထူးသဖြင့် Sony ကနှင့်အတူသစ်ကို Spider-Man သဘောတူညီချက်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ Iger နယ်သာလန်အမှန်တကယ်သဘောတူညီချက်အသစ်တစ်ခုအဘို့တောင်းပန်ဖို့တောင်းခံသည်မြေတပြင်လုံးပေးနေတာ၏ဆုံးဖြတ်ချက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကွောငျးအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
"ကျနော်တို့က D23 ကိုခေါ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုရှိခဲ့လျှင်, သူဆိုတဲ့ Pixar ရုပ်ရှင်ထဲတွင်အသံတစ်သံကြောင့်တွမ်ပစ္စုပ္ပန်ခဲ့သည် ထိုနောက် ခရစ် Pratt နှင့်ကပရိတ်သတ်တွေတွမ်နောက်တဖန်အံ့ဩခြင်းအံ့ဩခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုအသင်းအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး Spider-Man, ဖြစ်လာစေချင်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းခဲ့ပါတယ် "Iger ဟော်လန်, ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်တစ်ခုခုပြောခဲ့ဖြည့်စွက်, ထင်ရှား" ။ D23 ပြီးနောက်တွမ်အကြှနျုပျအဘို့အလုပ်မလုပ်သောလူဆက်သွယ်မေးမြန်းရာနှင့် said: "ကျွန်မအီးမေးလ်လိပ်စာသို့မဟုတ် Bob ၏တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ပေးလို့ရမလား" ။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါကအရမ်း protected ငါဒါကြောင့်သူတို့ကအရမ်းသတိထားကြပြီ။ ငါ "သေချာတာပေါ့သူအဆက်အသွယ်ငါ့ကို" ဟုပြောသည်သူကိုပြု၏။ "
"ကျနော်တို့ကစကားပြောသူအခြေခံအားဖြင့်လုပ်ခဲ့တယ် ... သူဖုန်းပေါ်မှာအော်ဟစ်" Iger ဒီလိုဖြစ်ပါဘူးဟုမတိုင်မီဦးဇော်လင်းက။ "ဒါပေမယ့်သူကအရမ်းဂရုစိုက်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအတကယ်တော့, ငါတို့သည်သူ့ကိုအကြောင်းအများကြီးဂရုစိုက်။ ထိုသို့အလွန်ကြီးစွာသော Spider-Man ပါပဲ။ "
"တကယ်တော့သူ့ကိုငါအဘို့အခံစားရတယ်, ထိုသို့ပရိသတ်တွေစေချင်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ" ဟု Iger ဆက်ပြောသည်။ "သူမ၏အတူတက်ဆွဲထားပြီးနောက်ကျနော်တို့ဒစ္စနေး Studios ကအဖွဲ့နှစ်ခုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုခဲ့ပြီးတော့ကျနော်ကို Sony ၏ဦးခေါင်းကိုခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ငါကဆိုပါတယ်" ကျနော်တို့ရမယ့်နည်းလမ်းရှာရမယ် ။ ဤသည်တွမ်အဘို့နှင့်ပရိတ်သတ်များအဘို့ပြုနေသည်။ "ဤကအားလုံးကိုဖြစ်ပျက်ပုံဖြစ်ပါသည်။
"တစ်ခါတလေကုမ္ပဏီများသည် [ ... ] သူတို့အရေးကြီးသောနေသောအခြားလူရှိပါတယ်အနည်းငယ်မေ့လျော့ညှိနှိုင်းရန်အခါ," ဟုအဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ CEO ဖြစ်သူကပြောကြားခဲ့သည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ Spider-Man ၏ပရိသတ်များအဘို့, Sony နဲ့ဒစ္စနေးနှင့်အတူအနည်းဆုံးနှစ်ခုကတခြားဇာတ်ကားတွေအပေါ်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် Spider-Man3အဆင့် MCU 16 ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဇူလိုင်လ 20214အပေါ်ပြသဖို့ခံရဖို့
Iger on ရဲ့ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်တစ်ခုကဗီဒီယို ဂျင်မီ Kimmel Live အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ်။
Image ကိုရင်းမြစ်: Lee က Jin-ယောက်ျားသည် / AP / Shutterstock
နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, 'နှင့်ရှိသမျှသောမဟုတ်ဘူး - BGR
'' ဧဒုံသေရွေးနှုတ်ခြင်း2'' နောက်ဆုံးတော့နောက်လကို PC ပေါ်မှာရောက်ရှိ - BGR
48th UPD အထွေထွေညီလာခံ - ပါဝင်သူများကစာနယ်ဇင်းသမားများအားစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှုမြင်သည်